Imidlalo yama-Epic inikele ngama- $ 1.2 million kwiBlender Foundation | Kusuka kuLinux
I-Epic Games yenze umnikelo wezigidi ezingama- $ 1.2 kuBlender Foundation
Njengengxenye yohlelo lwayo lwezezimali lwe- "Epic MegaGrants" kwezigidi eziyi- $ 100, Epic Imidlalo, umakhi we-Unreal Engine kanye nomdlalo odumile "Fortnite" wenze umnikelo ukusekela iBlender Foundation.
Kusukela muva nje ukhiphe imali engu- $ 1.2 million yemali kuBlender Foundation ngenhloso yokukhuthaza ukuthuthukiswa kwe- "Creative Software Suite Blender" okuwumthombo ovulekile wamahhala wohlelo lokumodela olunikeza uhla oluphelele lwamathuluzi avumela abaculi ukuthi bakhe imidwebo, ukugqwayiza, imiphumela ekhethekile nemidlalo ku-3D.
Lezi zimali ezitholwe eBlender Foundation zizokwabiwa ngezigaba eminyakeni emithathu ezayo. Njengoba kuhlelwe ukusebenzisa imali ekwandiseni abasebenzi bonjiniyela, ukuheha ababambiqhaza abasha, ukwenza ngcono ukuhlanganiswa komsebenzi kuphrojekthi nokwenza ngcono ikhwalithi yekhodi.
IBlender Foundation yinhlangano engenzi nzuzo ebhekele ukwenziwa kwesoftware yamahhala ye-Blender 3D.
Inikeza ngezinsizakusebenza ezidingekayo zokuxhasa umphakathi owakhiwe maqondana nokusetshenziswa nokuthuthukiswa kwesoftware yawo.
“Ukuba ne-Epic Games ngasohlangothini lwethu kuyimpumelelo yeBlender,” kusho uTon Roosendaal, uMsunguli kanye noMongameli we-Blender Foundation, enezela, “Ngalesi sibonelelo, sizokwenza utshalomali olubonakalayo ekuhleleni iphrojekthi yethu yokwenza ngcono ukuhlangana, ukudidiyela kanye nokwenza okuhle kunekhodi yekhodi. Ngenxa yalokhu, silindele ukuthi abanikeli bezimboni abaningi bajoyine amaphrojekthi ethu.
"Imitapo yolwazi, amapulatifomu namathuluzi avulekile abalulekile ekusaseni le-ecosystem yokuqukethwe kwedijithali," kusho uTim Sweeney, uMsunguli kanye ne-CEO ye-Epic Games, "iBlender iyinsiza esimeme emphakathini wezobuciko. futhi inhloso yethu ukusebenzela ukuthuthuka kwayo ukuze kuzuze bonke abadali. "
Yini i-Epic MegaGrants futhi kungani wenza le minikelo?
Uhlelo lwe-Epic MegaGrants lapho imali eyizigidi ezingama- $ 100 yabiwa, yakhelwe ukuxhasa onjiniyela bemidlalo abahlukile, ochwepheshe bebhizinisi, abezindaba nabadali bezokuzijabulisa, othisha, abathuthukisi bamathuluzi, kanye nabafundi abenza umsebenzi oncomekayo nge-Unreal Engine, kodwa futhi bathuthukisa amandla emithombo evulekile yomphakathi wehluzo le-3D.
Ngokusho kukaTim Sweeney, umsunguli nomphathi omkhulu we-Epic Games, amathuluzi avulekile, imitapo yolwazi kanye namapulatifomu abalulekile ekusaseni le-ecosystem yokuqukethwe kwedijithali.
IBlender ingelinye lamathuluzi afunwa kakhulu emphakathini ngakho-ke Imidlalo yama-Epic izibophezele ukuyikhuthaza ukuze kuzuze bonke abadali bokuqukethwe.
UTim Sweeney naye uphawule ngesikhundla senkampani kwiLinux, ethathwa njengengxenyekazi enhle kakhulu. I-Unreal Engine 4, i-Epic Online Services, ne-Easy Anti-Cheat zenzelwe i-Linux ngendlela yokwakha komdabu.
Le nkampani icabanga nokwandisa ukusetshenziswa kwewayini njengendlela yokusebenzisa imidlalo yeLinux. kusukela kukhathalogi yama-Epic Games.
Amahemuhemu wokumisa ukwenziwa kwe-Easy Anti-Cheat yeLinux angamanga: inguqulo yendabuko yeLinux yalo mkhiqizo ivivinywa nge-beta futhi isivele inikela ngosizo lokulwa nokukopela ngisho nemidlalo ekhishwe ngeWine neProton.
Okokugcina Kubalulekile ukukhumbula ukuthi, ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, kulindeleke ukuthi ngoJulayi 19, uma kungenazinkinga ngokuhlolwa kwenguqulo evunyelwe, i-Blender 2.80 kulindeleke ukuthi ikhishwe, okungenye yezinguqulo ezibaluleke kakhulu emlandweni wephrojekthi.
Le nguqulo entsha isishintshe ngokuphelele isikhombimsebenzisi somsebenzisi, esijwayele abasebenzisi babanye abahleli bezithombe namaphakeji e-3D.
Izinjini zokuhumusha ezintsha i-Workbench yokuhumusha okusheshayo nokulula ne-Eevee yokunikezwa kwesikhathi sangempela ziyethulwa. Kulungiswe i-3D Viewport.
Kungezwe uhlelo olusha lokusebenza ngemidwebo ye-2D kanye nezinto ezinokwakheka okuthathu. Injini yemidlalo eyakhelwe ngaphakathi isusiwe, esikhundleni salokho manje okuhlongozwa ukuthi kusetshenziswe izinjini zemidlalo yomuntu wesithathu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Epic Games yenze umnikelo wezigidi ezingama- $ 1.2 kuBlender Foundation
Igama lokuqala, okungenani eSpain, alikho.
Kukhona futhi ngokuyisisekelo laba bobabili obakhulumayo bayefana :). Ozithobayo.
Ngiyacela, isipiliyoni se-indie seLinux
Ubuchwepheshe be-Intel SST obuza ku-Linux kernel 5.3